Lalàna · Mey, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Mey, 2009
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Mey, 2009
Haiti, U.S.A.: Fahatsiarovana an'i Môpera Jean-Juste
Amerika Avaratra31 Mey 2009
Miraradraraka ny fanehoam-pankasitrahan'ireo vondrona mpitoraka blaogy ho an'i Fr. Gérard Jean-Juste, pretra Haitiana Katolika fantatr'ireo mpakafy azy amin'ny maha-tompondakan'ny mahantra azy sy mpanohana mafana fo ny antoko pôlitika Fanmi Lavalas , tarihan'ilay Filoha voaongana Jean Bertrand Aristide. “Dada Gerard Jean-Juste“, sarin'i danny.hammontree, ampiasàna ny Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-tsarin'i...
Ady & Fifandirana22 Mey 2009
Volavolan-dalàna vaovao hanaraha-maso ny orinasa mpitrandraka amerikana any RDC
Amerika Avaratra20 Mey 2009
Manoratra ny momba ny volavolan-dalàna vaovao naroso tao amin'ny antenimieran-doholona Amerikana hanamafisana ny fanaraha-maso ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany ananan'ny Amerikana tombotsoa ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô ny mpamaham-bolongana Kôngôley Alex Engwete. Napetraky ny senatera Repoblikana Sam Brownback, tohanan'ny senatera Russ Feingold sy Dick Durbin, tamin'ny 23 avrily ny...
Pakistana: Fandresen'ny Demokrasia
Pakistana13 Mey 2009
Tafaverina amin'ny toerany ny filohan'ny fitsarana tampony ao Pakistana, Iftikhar Mohammed Chaudry, fepetra namaly ny tanjona voalohan'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpitsara sy ireo mpisolo vava ary ny Diabe. Ny Praiministra Pakistane, nanambara izany nandritry ny kabariny tao amin'ny fahitalavitra. Fanampin'izany dia nanome toky ny governemanta fa hamerina amin'ny toerany ireo mpitsara...
Siria : Fanehoan-kevitra taorian'ny fanapàhana (=didy) navoakan'ny Tribonaly manokana momba an'i Libanona
Libanona06 Mey 2009
Ny Tribonaly manokan'ny Firenena Mikambana momba an'i Libanona dia nandidy androany ny hamoàhana malalaka ireo olona efatra voarohirohy tamin'ny raharaha famonoana ny Praiminisitra Libane teo aloha Rafiq Hariri, tamin'ny 14 febroary 2005, tao Beyrouth. Siria no notondroin'ny rehetra ho tompon'antoka, izay nitarika faharisarisan'ny fifandraisany tamin'ny Tandrefana, tonga hatrany amin'ny fampodian'ny...
Iran: Novonoina ho faty i “Voafonjan'ny loko”
Iràna06 Mey 2009
Novonoin'ny fitondram-panjakana Iraniana tamin'ny Zoma maraina tamin'ny faha-23 taonany ny tovoavy 23 taona antsoina hoe Delara Darabi Delara Darabi , izay voaheloka ho namono olona tamin'ny faha-17 taonany ary notazonina nandritra ny taona maro tao amin'ny Fonjaben'i Rasht Central. Nahazo ny lazan'ny anarana ho “voafonjan'ny loko” i Delara noho ny...
Timor atsinanana: Nanoratra tamin’ny fomba fanoratana SMS ny mpanao gazety iray mba hamborahana fanaovana kolikoly
Timor Atsinanana02 Mey 2009
Ny volana Oktobra lasa teo, nanoratra SMS momba ny fandosirany i José Antonio Belo, maintimolalin’ny fanaovan-gazety ao Timor Atsinanana, mba hamborahana fanaovana kolikoly nandraisan’ny Ministry ny Fitsarana any an-toerana anjara. Androany, miatrika fanenjehana noho ny fanalam-baraka ilay mpanao gazety. Manoratra ao amin’ny gazetiboky mpilaza vaovao Tempo Semanal, namoaka ny antsipirian’ilay...